Ahiana ho maro hatrany ny voa, ka ny fanantonana toeram-pitsaboana sy fanaovana fitiliana no vahaolana. Ny maraina miaina toy ny fiainana andavanandro ao Toamasina, fa isaky ny hariva no manao fangala-piery amin'ny mpitandro filaminana, hoy ny fampitam-baovao. Ny toromarika eo ihany fa ilay aretina mihitsy no fisaka sy zavatra tsy ampoizina dia mety hampindra azy. Na ny vola aza mety hamindra azy. Ny olona anefa tsy afaka manao “désinfectation” na mamono ny mety otrik’aretina amin’ny vola, fa dia mandray sy mampirina ao anaty paosy fotsiny, mitambatra amin'ny finday avy eo, ny tànana anefa mitsofoka ao am-paosy matetika. Tena manahirana sy ilàna fahamailoana hatrany hatrany.